Ha Ii Dooranina Madaxwayne”Abdilmalik Musa Coldoon | Berberatoday.com
Ha Ii Dooranina Madaxwayne”Abdilmalik Musa Coldoon
Ha ii dooranina madaxwayne
Ha ii dooranina madaxwayne aniga , hadii aad ii doorataan madaxwayne , waxa aan dib u xorayn lahaa dhulalka soomaaliyeed ee la haysto , ee ay haysto itoobiya iyo kiiniya . Ka hor inta aanan bilaabin raadinta dhulka iga maqan , waxa aan ka xoraynlahaa dhulka inta gacanta iigu jirta, waxa aan ka xoraynlahaa kuwo la shaqeeye cadawga , kalana shaqeeya sidii cadawgu gacnta ugu dhigilahaa inta dhulka soomaaliyeed soo hadhay ee u nool.
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan ka nadiifinlahaa maxkamadaha sharciyada aan ahayn kuwa islaamka sida xeerarka ciqaabta ee laga dhaxlay gaalada.
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan joojinlahaa qaadka ka imanaya itoobiya iyo kiiniya .
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne dakadda Berbera waxa aan ka dhigi lahaa mid dalku helo faaidadeeda koobaad , labaad iyo sadexaad .
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan mamnuucayaa in gudaha dalka lagu xuso maalmaha qaran ee itoobiya .
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan manhajka dugsiyada ku darilahaa maadada wadanimada ,waxaana laguu barilahaa ardayda in itoobiya ay tahay cadawga abadiga ah ee soomaalida .waxa aan xidhi lahaa sidoo kale jaamacadaha itoobiyaanka ah ee dalka ku soo badanaya .
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan jeelka ka soo daynlhaa cabdiwaaxid gamadiid oo loo xidhay gabay uu ka tiriyey weeraradii baariis ee faransiiska , sidoo kale waxa aan jeelasha ka soo daynlahaa inta dulmiga ku xidhan.
Ha ii dooranina madaxwayne , Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan hurgufilahaa waxkasta oo hay’ad sheegta ee suntan kula dhexjira umadda.
Ha ii dooranina madaxwayne , hadii aad ii doorataan madaxwayne waxa aan ku dadadaalilahaa iskufilaansho aan gaadhsiiyo dalka aniga oo horumarinaya beerha, xoolaha iyo waxbarasho dhab ah.
( intaasi waa qaybta koobaad )